ट्याक्स हेभन मुलुकमा चौधरी ग्रुपका परिवारैको लगानी « Rara Pati
कृष्ण आचार्य र रामु सापकोटा/खोज पत्रकारिता केन्द्र
असोज, १८, काठमाडौं । नेपाली ‘कानूनका छिद्रको उपयोग गरी वैधानिक रूपमै विदेशमा लगानी गरेको’ बताउने अर्बपति विनोद चौधरी सहित उनको परिवारका पाँच जनाले ट्याक्स हेभन (कर प्रणाली पारदर्शी नहुने र जवाफदेही पनि नखोजिने) मुलुकमा लगानी गरेको तथ्य फेला परेको छ ।
ुमेरा लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती थियो कानूनले छोडेका छिद्रहरू पहिल्याउने र यस्तरी पाइला सार्ने । ताकि मेरो विदेशी लगानीमाथि कसैले कानूनी प्रश्न उठाउन नसकोस्ु, सन् २०१३ मा प्रकाशित ‘विनोद चौधरी ः आत्मकथा’ शीर्षकको पुस्तकमा चौधरीले भनेका छन् । त्यसका लागि आयकर ऐनको ‘वासिन्दा व्यक्ति’ सम्बन्धी प्रावधानलाई उनले ‘छिद्र’ को रूपमा व्याख्या गरेका छन् ।
‘यो व्यवस्थालाई उहाँले गलत रूपमा प्रयोग गर्नुभएको छ’ पूर्व अर्थ सचिव रामेश्वर खनाल भन्छन्, ‘यो व्यवस्थाले नेपालबाट विदेशमा पैसा लैजाने र त्यहाँ लगानी गर्नका लागि छूट दिएको हैन । कुनै नेपाली नागरिक १८३ दिन विदेशमा बस्छ, त्यसपछि उसले आम्दानी गर्छ भने उसले मात्रै विदेशमै लगानी गर्न पाउँछ ।’ तर चौधरीले नेपालबाटै विदेशमा पैसा लगानी गरेको हुुँदा उनको दाबी ‘तर्कसंगत÷युक्तिसंगत’ नभएको खनालको प्रतिक्रिया छ । ‘नबिल बैंकको विदेशी लगानीकर्ताले पाउने लाभांश रकम विदेश लगिएको छ’ खनालले भने, ‘तर त्यो कम्पनीको मालिक त उहाँ नै हुनुहुँदोरहेछ । त्यही रकमबाट उहाँले विदेशमा लगानी गर्नुभएको हुनसक्छ । नेपालबाट लगिएको रकमलाई उहाँले विदेशमा बस्ने छोराहरूले कमाएको हो भनेर पुष्टि गर्न खोज्नुभएको छ । जुन गलत हो ।’ यस आधारमा पनि चौधरी परिवारले विदेशमा गरेको लगानीको वैधतामाथि प्रश्न खडा गरेको छ । (विभिन्न तहगत कम्पनी खडा गरी चौधरीले नबिल बैंकको आम्दानी कसरी विदेश पुर्‍याए ?
‘विदेशीले ब्रिटिश भर्जिन आइल्याण्डस्थित सिनोभेसन कम्पनीमा ५० हजार थान कित्ता शेयर गिफ्ट दिएको हुनाले त्यसमा आफ्नो नाम रहने गरी विनोदले अनुमति लिएका छन्ु राष्ट्र बैंक स्रोत भन्छ, ुयस बाहेक अन्य कुनै पनि कम्पनीमा लगानी गर्न विनोद, निर्वाण र सारिकाले अनुमति लिएको विवरण हामीले फेला पारेनौं ।’
विनोदले सिनोभेसनमा गिफ्टेड शेयर भने पनि त्यसमै परिवारका अन्य सदस्यको पनि लगानी रहेको र त्यही कम्पनी मार्फत विभिन्न तहगत कम्पनी खडा गरी उनले आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय व्यावसायिक सञ्जाल विस्तार गरेको प्यान्डोरा पेपर्सको विवरणले देखाउँछ । यही सिनोभेसनको अन्तिम लगानीकर्ताको प्रमाण खोज्दै राष्ट्र बैंकले नेपालस्थित नबिल बैंकको २०७६÷७७ देखि उनले पाउनुपर्ने लाभांश समेत रोकिदिएको छ । ‘विदेशी लगानी भनिए पनि सिनोभेसनको अन्तिम लगानीकर्ता चौधरी परिवार नै हुनसक्ने आशंकामा करीब डेढ वर्षअघि राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिले नै निर्णय गरेर लाभांश वितरण रोकिएको हो’ राष्ट्र बैंक स्रोत भन्छ, ‘सिनोभेसनको अन्तिम लगानीकर्ताको विवरण उनीहरूले ल्याउन सकेका छैनन् । नल्याएसम्म लाभांश वितरण रोकिइरहनेछ ।’
नेपालको कानूनी दृष्टिकोणले मात्रै हैन विश्वव्यापी परिपे्रक्ष्यमै चौधरीको यो काम शंकास्पद हो । सम्पत्तिको स्रोत देखाउनु नपर्ने, कम्पनी खडा गर्न सजिलो मानिने, कर छल्न अनुकूल मानिने ‘ट्याक्स हेभन’ मुलुकमा चौधरीले गरेको जस्तै अफसोर लगानीमाथि विश्वव्यापी रूपमै प्रश्न उठ्दै आएको छ । किनभने, ‘यसले छायाँ अर्थव्यवस्थालाई देखाउँछ । त्यो (अफशोर) एक छायाँ संसार (स्याडो वल्र्ड) हो । यो एउटा त्यस्तो संसार हो जसले पहिलेदेखि नै धनीहरूलाई समृद्ध बनाइरहेको छ,’ अष्टे«लियाको एबीसी टेलिभिजनका पत्रकार एलिस वर्थिङटनसँगको अन्तर्वार्तामा आईसीआईजेका निर्देशक जेरार्ड रायलले भनेका छन्, ‘सेल कम्पनीहरू अफशोर संसारमा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा मनी लाउण्ड्रिङ (मुद्रा निर्मलीकरण) गर्ने जस्ता अपराधका अनिवार्य साधनहरू हुन् । अफशोर संसार अपराधीहरूका लागि शक्ति हो । किनभने उनीहरूलाई दुई वा दुईभन्दा बढी फरक तहहरूमा अफशोर सेल कम्पनी मार्फत एउटा अपराध लुकाउन सकिन्छ भन्ने कुरा थाहा छ ।’
सिनोभेसनको अन्य निर्देशकहरूमा भारतीय नागरिक चन्द्रशेखर जलान, सिंगापुरका नागरिक कमलकिशोर, बाङ्लादेशी मूलका अमेरिकी नागरिक अब्दुल अवाल मिन्टु (को हुन मिन्टु ?) र देश नखुलेका तर श्रीलंकामा बस्दै आएका तिलक डे जोयजा छन् । यस्तै, सिनोभेसनको निर्देशक कम्पनीमा हङकङस्थित क्याप्सेट लिमिटेड छ ।
मध्य अमेरिकी मुलुक पनामाको सिभिजन होल्डिङ्स एस।ए।नामक कम्पनी पनि सिनोभेसनको साधारण सदस्य रहेको पाइएको छ । यो कम्पनीले १४ मार्च २००३ मा सिनोभेसनको प्रति कित्ता एक डलरका दरले एक करोड ८० लाख ८५ कित्ता शेयर खरीद गरेर लगानीकर्ताको रूपमा भित्रिएको हो । पछि, २७ जुलाई २००६ मा यो कम्पनीले पुनः सिनोभेसनको एक लाख ४९ हजार ९९७ कित्ता र २५ अगष्ट २०११ मा ९८ लाख कित्ता शेयर खरीद गरेको भेटिएको छ । यसरी सिभिजन ‘होल्डिङ्स एस।ए’ ले १४ मार्च २००३ देखि २५ अगष्ट २०११ सम्मको अवधिमा कुल २ करोड ८० लाख ३४ हजार ९९७ अमेरिकी डलर बराबरको सिनोभेसनको शेयर खरीद गर्‍यो । तर, यसैबीच सिभिजनले २७ जुलाई २००७ मा सिनोभेसनमा भएको आफ्नो एक करोड ८० लाख ८५ संख्याको शेयर त्यति नै मूल्य (अमेरिकी डलर) मा बिक्री गर्‍यो । यसपछि सिभिजनको सिनोभेसनमा जम्मा एक अमेरिकी डलरका दरले ९९ लाख ४९ हजार ९९७ संख्यामा साधारण शेयर लगानी रहेको कागजातहरूले देखाएको छ ।
राष्ट्र बैंकको विवरण अनुसार ब्रिटिश भर्जिन आइल्याण्डको सिनोभेसन कम्पनी चौधरी परिवारका विनोद, राहुल र बरुणको लगानीमा स्थापित कम्पनी हो । जसमा विनोदको ०.५ प्रतिशत, बरुणको ४९.७५ प्रतिशत र राहुलको ४९.७५ प्रतिशत शेयर रहेको राष्ट्र बैंक स्रोतले उपलब्ध गराएको विवरणमा उल्लेख छ । ुअरू कसैले गिफ्ट शेयर दिएको र त्यहाँ लगानी गर्न विनोदले राष्ट्र बैंकसँग अनुमति लिएका हुन्ु राष्ट्र बैंक स्रोत भन्छ । चौधरीले पनि उक्त शेयरलाई ‘गिफ्टेड’ भन्दै आइरहेका छन् । तर उक्त कम्पनी विनोद र उनका परिवारले नै ब्रिटिश भर्जिन आइल्याण्डमा खडा गरेको प्रमाणहरूले देखाउँछ । जसको चर्चा माथि गरिसकियो । अर्कोतर्फ सिनोभेसनमा लगानी गरेको भेटिएका विनोदकी श्रीमती सारिका र जेठा छोरा निर्वाणको हैसियत कहिल्यै पनि गैरआवासीय नेपाली नागरिक रहेन । यसबाट पनि उनीहरूले नेपालको कानून उल्लंघन गरेको देखाउँछ ।
अर्बपति विनोद चौधरीको सिनोभेसन नामक कम्पनीमा ०.५ प्रतिशत शेयर रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । विनोदको योे शेयरबाट प्राप्त आम्दानी अनिवार्य रूपमा नेपाल भित्र्याउनुपर्ने दायित्व हुन्छ । तर विनोदले त्यो शेयर बराबरको लाभांश रकम विदेश नै लगेका थिए । ‘उनी नेपाली नागरिक भएपछि उनले त्यो लाभांश नेपाल नै राख्नुपर्ने थियोु पूर्व अर्थ सचिव खनाल भन्छन्, ुत्यो रकममा यहीं कर लाग्छ । उनले उता लगेर पूँजी पलायन गर्न खोजेको देखिन्छ । जसमा राष्ट्र बैंकले रोकिदियो ।’
राहुलसँगै यो कम्पनीका अन्य निर्देशकहरूमा विनोदकी श्रीमती सारिकादेवी, जेठा छोरा निर्वाणकुमार चौधरी ९दुवै नेपाली नागरिक हुन्० र कान्छा छोरा बरुण चौधरी छन् । सारिका र निर्वाणले उक्त कम्पनीमा लगानी गर्न काठमाडौं तथा बरुणले दुबईको जुमेरा आइल्याण्डको ठेगाना प्रयोग गरेका छन् ।
उनले आफ्नो आत्मकथामा उल्लेख गरे अनुसार शुरूमा भारतमा ुसिनोभेसन अन्तर्गत सीजी फुड एण्ड इन्डिया प्राइभेट लिमिटेड’ स्थापना गरिएको थियो । ‘फास्ट मुभिङ कन्जुमर गुड्स को बिजनेस हेर्ने यो कम्पनी २०५८ सालमा आसामको गुवाहटीमा दर्ता भयोु उनले आफ्नो आत्मकथामा लेखेका छन्, ुवाइवाइ प्लान्टको पहिलो साइट आसाममै छानेका थियांै । हाम्रो खास रोजाइ त सिक्किम नै थियो ।ु
तर पछि चौधरीले सिक्किममा पनि प्लान्ट स्थापना गरे । ुत्यो बेला सिक्किममा वाइवाइ प्लान्ट शुरू भएको खबरले नेपालमा एक किसिमको तरंग थियोु उनले पुस्तकमा भनेका छन्, ुयो संभवतः नेपाली उद्यमीले विदेशी भूमिमा सञ्चालन गरेको यति ठूलो स्तरको पहिलो उद्योग थियो । भारतमा लगानी गरेको भनेपछि नेपालमा अलि बढी नै हल्लीखल्ली हुने भइहाल्यो ।ु
विदेशमा लगानी नियन्त्रण गर्न बनेको ऐन जीवित छँदाछँदै चौधरी ग्रुपले कसरी भारतमा कारखाना खोल्न सक्छ भन्ने कुरा उठ्यो । ुमैले कानूनी रूपमा कुनै तलबितल हुन दिएको थिइनँु उनले पुस्तकमा भनेका छन्, ुसिक्किम कारखाना चौधरी ग्रुप अन्तर्गत होइन, सीजी फुड्स इण्डिया अन्तर्गत सञ्चालित थियो । र सीजी फुड्स भनेको सिंगापुरमा दर्ता भएको सिनोभेसनकै अर्को कम्पनी हो ।ु
ुमैले अन्तर्राष्ट्रिय विस्तारका लागि सिंगापुर छान्नुको मुख्य कारण कमलकिशोरसँगको निकट सम्बन्धले नै होु चौधरीले आत्मकथामा भनेका छन् । उनले अहिले सीजी ग्लोबल कम्पनी मार्फत विभिन्न देशमा लगानी गरिरहेका छन् ।
विनोदले सीएनबीसी अफ्रिकालाई सन् २०१६ मा दिएको अन्तर्वार्तामा पूर्वी अफ्रिकामा उनले ६ वटा होटलमा लगानी गरिरहेको बताएका थिए । त्यस्तै अमेरिकाको जेएफके एअरपोर्टमा होटल ९पहिले हिल्टन पछि र्‍याडिशनको नाममा स्तरोन्नति०मा लगानी गरेको उल्लेख गरेका थिए । उनले होटल क्षेत्रको अन्तर्राष्ट्रिय ब्राण्ड ताज होटलमा समेत विभिन्न ठाउँमा साझेदारी गरी होटल तथा रिसोर्ट स्थापना गरिसकेका छन् ।
नेपालबाट ट्याक्स हेभन र ट्याक्स हेभनबाट विश्वका विभिन्न देशमा व्यावसायिक लगानी गर्ने विनोद सन् २०१३ मा अमेरिकी व्यापारिक पत्रिका फोर्ब्सको ‘अर्बपती’ सूचीमा पर्न सफल भएका थिए । शुरूमा फोर्ब्सको सूचीमा पर्दा चौधरीको सम्पत्ति एक बिलियन अमेरिकी डलर ९रु।१ खर्बभन्दा बढी० थियो ।
त्यसयता वर्षेनि उनको सम्पत्ति बढ्दो क्रममा छ । सन् २०१९ मा विनोदको सम्पत्ति १।७ बिलियन अमेरिकी डलर ९झन्डै रु।२ खर्ब० पुगेको थियो । फोर्ब्सका अनुसार पछिल्ला दुई वर्षमा उनको सम्पत्ति बढेन, घट्यो । अर्थात् सन् २०२० र २०२१ मा १।४ बिलियन अमेरिकी डलर ९करीब डेढ खर्ब रुपैयाँ० छ । चौधरी हाल विश्वका अर्बपतिहरूमध्ये २ हजार १४१औं स्थानमा छन् ।
उल्लिखित आरोपहरूमाथि चौधरी ग्रुपले छोटो प्रतिक्रिया दिंदै नेपाल र विदेशी कानूनको उल्लंघन नगरेको जनाएको छ । ‘मेरा बुवा एवम् सीजीका अध्यक्षका अनुसार सिनोभेसन र हाम्रा सबै कम्पनी समूहले विदेशी लगानी सम्बन्धी नेपाली कानून सहित लागू भएका सबै कानून पालन गरेका छन् । त्यसैले तपाईंको इमेलमा उल्लिखित अनुसन्धान सम्बन्धमा हाम्रा थप टिप्पणी र विचार छैनन्’ खोज पत्रकारिता केन्द्र कालागि वाशिङ्टन पोष्टका पत्रकार पीटर होरिस्कीले सोधेको प्रश्नमा जवाफ दिँदै राहुल चौधरीले भनेका छन् । सीजीले सम्मानित, प्रतिष्ठित र अग्रणी बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूसँग साझेदारी गरेको उनको भनाइ छ । ‘जहाँसम्म हाम्रो लगानीमा साझेदारहरूको कुरा छ, सीजी र यसका कम्पनी समूहमा विश्वस्तरमा सम्मानित, प्रतिष्ठित र अग्रणी बहुराष्ट्रिय कम्पनीसँग हाम्रो साझेदारी छ । उनीहरूका बारे सार्वजनिक डोमेनमा जानकारी सहजै उपलब्ध छ’, राहुलले इमेल मार्फत प्रतिक्रिया दिंदै भने, ‘हामी आफ्ना साझेदार विरुद्धका आरोपबारे टिप्पणी गर्न चाहँदैनौं । यसबारे तपाईंलाई कुनै प्रश्न गर्नु छ भने सीधै उनीहरूसँग सम्पर्क गर्नुहोस् ।’